ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၆ဝ) ကျော်လာပြီ၊ လူထုက တောင်းဆိုနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရ? - Yangon Media Group
ပြည်တွင်းစစ် ဖြစ်လာသည်မှာ နှစ်ပေါင်း(၆ဝ) ကျော်လာပြီ၊ လူထုက တောင်းဆိုနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးရ?
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂
ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာတာ နှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ပြီ။ အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့က အရေး ကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့အင်မတန်လိုလားတယ်။ လူထုကလည်းတောင်းဆိုတယ်။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားရမယ့်သဘော ကျွန်တော် အဲဒီလိုပြောချင်တယ်ဟု မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP)ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ထောမွန်က ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေ ပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ချင်းတွင်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)နှင့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဂျပန်အစိုးရ အထူးကိုယ်စားလှယ် နိပွန်ဖောင် ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌတို့ ပူးပေါင်းပြုလုပ်သည့် သတင်းထောက်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ထောမွန်က ”ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းပြောတယ်။အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို သူက ကြိုးပမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့၊ ကျွန် တော်တို့လည်း ထောက်ခံတယ်။ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ၂ဝ၁၅ ကနေ ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထိုးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မထိုးလဲဆိုတော့ All inclusive ဖြစ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်။ အစိုးရကသဘောမတူဘူးဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မထိုးဘူး။ အဲဒါနဲ့ဆက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တပ်ပေါင်းစု အနေနဲ့ ပြန်ဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးတယ် လေ။ ဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့ ပြေလည်သင့်သလောက်ပြေလည်တာကို လက်မှတ်ထိုးတာဖြစ်တယ်။
အဲဒီတော့သဘောက ဒီနေ့အခြေအနေနဲ့ ဟိုတုန်းကအခြေအနေ မတူဘူးလေ။ ဒါနားလည်ထားဖို့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အဲသလို ပေါ့။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်မှာမထိုးတာက အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။ All inclusive ဖြစ်ဖို့၊ ဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူး။ အစိုးရက လိုက်မလုပ်တော့ ကျွန်တော်တို့က ပြန်ဖွဲ့ပြီးတော့ တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့ (UNFC) အနေနဲ့ကြိုးစားတယ်။ တစ်နှစ်နဲ့ခြောက်လ ကျော်သည့်တိုင် (၈) ချက်ကို (NCA) မလုံလောက် ဘူးဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တပ် ပေါင်းစု အနေနဲ့ (၈) ချက်ကိုတင် ပြီး ဆွေးနွေးတယ်။ တစ်နှစ်ကျော် တစ်နှစ်နဲ့တစ်ဝက်နီးပါး အဲဒီလို အချိန်ယူပြီးဆွေးနွေးတယ်။ ပြေလည်သလောက်တော့ ပြေလည် တယ်ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ လက်ခံနိုင်သင့် လက်ခံနိုင်တော့ လက်မှတ်ထိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာပေါ့။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပါနိုင်ရေး ကျွန် တော်တို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့တပ် ပေါင်းစုမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ရေး ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမဲ့တချို့အဖွဲ့ တွေကလည်း ကိုယ့်အခက်အခဲနဲ့ ကိုယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ ပေါ့။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ (LDU) နဲ့ လက်မှတ်ထိုးဖို့ဖြစ်လာတယ်။ အခြေအနေက အဲဒီလိုဖြစ်လာတယ်။ ဒီနိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့ အယူအဆအရ သူကတတ်နိုင်သလောက် ဘေးကကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောက ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုဆိုတယ်။ အများကြီးဝမ်းသာတယ်။ ရှေ့ဆက်ကြိုးပမ်းမယ့် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဝမ်းသာတာပေါ့။ အဲဒါလည်းရှိတယ်။
ဒါလည်းရှိတယ်လို့ တင်ပြချင်တယ်။ အဲဒီတော့ အခု ပြောသလိုပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လည်း ကြိုးစားမယ်လေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးပြည် သူလူထုအတွက်တကယ်ရေရှည် တည်တံ့ဖြစ်ဖို့ အရေးကြိုးစားမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလာမလဲဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။ ကျွန် တော်တို့ကြိုးစားမယ်။ လူထုအတွက်ရော ရည်ရွယ်ပြီးကြိုးစားမယ်။ အဲဒီလိုဆန္ဒရှိတယ်။ နောက်တပ်ပေါင်း စုတစ်ခုလုံးဖြစ်ပေါ်နိုင်ရေး ကျွန် တော်တို့ ပထမဦးဆုံးလက်မှတ်ထိုး ပြီးတော့ ကြိုးစားမယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ ဂျပန်ဖောင် ဒေးရှင်းနိပွန်ကလည်း အကူအညီ ပေးမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်။ တစ်တိုင်းပြည်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးဖို့ က All inclusive ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ကြိုးစားရမှာပေါ့ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်တယ်ပေါ့။ လူထုအတွက်ဘယ်လို အထောက်အကူဖြစ်မယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါအပေါ်မှာလည်း ရပ်တည်တာ ပေါ့။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည် ဆောက်ပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းမယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးပီသမယ်။ တကယ်ငြိမ်းချမ်း မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကြိုးစား ရမှာပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးက အရေး ကြီးတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လာ တာနှစ်ပေါင်း ၆ဝ ကျော်ပြီ။ အဲဒီ တော့ကျွန်တော်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး ရဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော်တို့အင်မတန်လိုလားတယ်။ လူထုကလည်းတောင်းဆိုတယ်။ အဲဒီ တော့ ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမယ့် သဘော ကျွန်တော်အဲဒီလိုပြောချင်တယ်”ဟု သတင်းထောက်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာဂျပန်အစိုးရအထူးကိုယ်စားလှယ်နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာဆာဆာကာဝါက” NCA လက်မှတ်ထိုး ပြီးမှ ဒေသခံတွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေထဲက ဘယ်ဟာတွေ ဦးစားပေးကူ ညီစေချင်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ထဲမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးတော့မှ စီမံကိန်းတွေကို အမြန်ဆုံးဖြစ်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်သွားပါမယ်”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မည်သည့်အတိုင်းအတာဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် ကူညီမည်ဆိုသည်မှာ အဆိုပါအချက်များပေါ်တွင် မူတည်သော်လည်း မစ္စတာဆာဆာကာဝါက အမြန်ဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားသည်။ ” NCA လက်မှတ်ရေးထိုးမယ့် အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့ ဒေသခံတွေ ငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့အကျိုး ကျေးဇူးကို အမြန်ဆုံးခံစားနိုင်ဖို့ ဂျပန်အစိုးရ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ အစွမ်းကုန်ကူညီသွားမှာပါ”ဟု မစ္စတာဆာဆာကာဝါက ပြောကြားခဲ့သည်။
လူဦးရေ ၃၄ဝဝ ကျော်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကို ပုံဖော်ပြီး ဂင်းနစ် ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်ရန် ကြိ??
ဗိုလ်အောင်ကျော် လမ်းထောင့် မီးပွိုင့်အနီးတွင် ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်သုံးစီး ဆင့်တိုက်မှုဖြစ်ပွား
သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကို ကျပ်သိန်း ၇ဝ ကျော် လာဘ်စားမှုဖြင့် အဂတိ တိုက်??
ထုတ်လုပ်ရေးမှူးကို ဖယ်ရှားပေးမှ သာလျှင် Wonder Woman ရုပ်ရှင်သစ်တွင် ပါဝင်မည်ဟု ဂယ်ဂါဒေါ့တ် တောင်း??
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်များ ပိုမို အားကောင်းလာ သလို ပိုမိုကောင်းမွန် ထိရောက်သည့် သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခ